Iyi ndiyo nyowani Pamba Podhi pfupi firimu inotungamirwa na, Spike Jonze | Ndinobva mac
Mutauri mutsva weApple, iyo HomePod, ikozvino yaonekwa mune shambadziro nyowani yakatangwa neApple uye inotungamirwa naSpike Jonze. Jonze, mutungamiriri weAmerica uye mugadziri anozivikanwa nehuwandu hwezvinhu zvine chekuita nemimhanzi uye mavhidhiyo aakatungamira.
Mune ino kesi protagonist yechiziviso hapana mumwe kunze kweiyo ichangoburitswa HomePod neApple, chigadzirwa chine chekuita nemumhanzi chinoratidzika kunge chiri kure nekutangwa munyika dzese nhasi, asi patinongofunga nezvazvo, Apple ichatanga kuigovera pasirese. Pasina zvimwe zvakawanda zvekutaura pamusoro penyaya iyi yekumisikidzwa kwePamba Pod yakaitwa naApple, chakanakisa chinhu ona iyi firimu fupi nyowani inozova kushambadza Uye izvo zvatove zviripo pane yeApple yepamutemo YouTube chiteshi uye kuti iwe uchaona zvechokwadi munguva pfupi munyika umo iyi Apple smart speaker inotengeswa:
Shambadziro nyeredzi muimbi weBritish uye mutambi FKA matavi, zita chairo Tahliah Debrett Barnett. FKA matavi, akasarudzwa kuBritish Breakthrough Artist uye Briteni Mukadzi Solo Artist kuBrit Awards, iyo yaanozivikanwa munyika yemimhanzi.
Pasina kupokana chatiri kuda ndechekuti HomePod inowanikwa munyika dzese nekukurumidza uye Siri, zvakare protagonist yenzvimbo nyowani yeApple apo matavi eFKA, anokukumbira kuti uise imwe mimhanzi yaunoda. Parizvino takatarisana ne pfupi firimu reanopfuura maminetsi mana, asi vane vhezheni yeminiti yakagadzirira kushambadzira kweterevhizheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Iyi ndiyo nyowani Pamba Podhi pfupi firimu inotungamirwa na, Spike Jonze